Kuuriyada Waqooyi oo gantaal ku ridday badda Japan. | Saxil News Network
April 5, 2017 - Written by Cabdiqani Deeq
Tijaabinta gantaalladan ayaa dareen ku abuurtay dalalka dariska ah
(Saxilnews)Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabo ahaan gantaal riddo dheer uga soo gantay dekedda dhanka bari ku taalla ee Sinpo iyada oo ku riday dhanka badda Japan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Rex Tillerson ayaa tijaabintan ku tilmaamay “mid kale” oo ka mid ah gantaalada riddada dhexe, isaga oo intaas ku daray “in Maraykanku uu in badan ka hadlay xaaladda Kuuriyada Waqooyi” isla markaasna aysan wax intaas ka badan ka sheegaynin”
Ra’iisulwasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa arrintan ku tilmaamay “halis heer cusub ah”.
Image captionKuuriyada Koonfureed ayaa si is dabajoog ah gantaallo u tijaabinaysay bilihii u dambeeyay.
Shiinaha ayaa inbadan ahaa saaxiibka ugu dhaw ee dublamaasiyadda Kuuriyada Waqooyi iyo waliba saaxiib dhanka ganacsiga